‘कडा निर्णय लिने स्थिति नआओस्, आ–आफ्नो कर्तव्य बोध गरौँ’ « प्रशासन
प्रकाशित मिति : 31 March, 2020 2:33 pm
काठमाडौँ । डा. युवराज खतिवडा हरेक विषयलाई प्रष्टसँग राख्न सक्ने खुबी भएका व्यक्तित्वका रुमपा परिचित छन् । पछिल्ला दिनमा उनले अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सरकारको प्रवक्ताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेक छन् । विश्वभर कोरोनाको त्रास र जोखिम बढिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र कोरोनासँग जुध्ने सरजाम जुटाउने कार्यमा उनी खटिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा कोरोनाको संक्रमण कम गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा अनवरतरुपमा खटिरहहेका डा. खतिवडाले सरकारले चालेका कदमबारे थप प्रष्ट पारेका छन् । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यून गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गरेका निर्णयबारे उनीसँगै गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकारले पछिल्ला दिनमा एक दिन बिराएर केही न केही निर्णय गरिरहेको छ । आवश्यकता पर्दा दिन दिनै पनि निर्णय गरिरहेको छ । हाम्रा निर्णयहरु पूर्व तयारीका लागि नै धेरै छन् । खासगरी कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्‍यौँ । त्यसमा हवाई मार्ग, स्थलमार्ग बन्द ग¥यौँ । त्यो बन्द गरेपनि बन्द हुनुभन्दा अगावै प्रवेश गरेका नेपाली सङ्क्रमित पो थिए कि, छन् कि, लक्षण देखिएका छन् कि, स्थानीय तहबाट सूचना लिएर त्यस्ता बिरामी वा सङ्क्रमितको विषयमा जानकारी दिने कुरा पनि छ । त्यस्तै निश्चित देशबाट आएकालाई समय अवधि नै तोकेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा गरेका थियौँ । त्यस्ता व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको, सेवा पुगे नपुगेको जानकारी पनि लिनुपर्छ । त्यस आधारमा हामीले अझ बढी उच्च सतर्कता अपनाउँदै जाने कुरा पनि भयो ।
आइतबारै हामीले कोभिड–१९ समन्वय गर्नका लागि ‘कोरोना कन्ट्रोल म्यानेजमेन्ट कमिटी’ (सिसिएमसी) भनेर व्यवस्थापन कमिटी गठन गरिसकेका छौँ । त्यो कमिटीले पनि यसको बारेमा अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । सेवा नदिने अस्पताललाई कुनै छुट हुँदैन । उनीहरुले सेवा दिनुपर्छ । हाम्रो काम स्वास्थ्य सामग्री, सुरक्षित उपकरण, औषधिहरुको बजारमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिदिने हो ं। अहिले त्यो हुन थालेको छ । ‘यदि’, ‘तर’ भन्ने हुँदैहुँदैन । सरकारले निर्णय लिन चाह्यो भने त जेठ १५ मा जस्तो निर्णय पनि लिन सकिहाल्छ नि ? त्यसो भएका कारण त्यो स्थितिमा आउन नै नपरोस्, सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने बजेटबाट उठाउनुपर्ने कर र शुल्क त उठाइहाल्छ । अहिले सहयोग गर्नुभयो भने सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबाट सहुलित दिने कुरा हेर्छ पनि । त्यसो हुनाले मेरो अनुरोध फेरि पनि के हो भने त्यो बुझिदिनुप¥यो । अहिलेको विशेष अवस्थामा त्यति सदासयता देखाइदिनु पर्‍यो ।
अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण नहोस् भनेर सरकारले चालेको कदमको जनता आफैँले स्वस्फूर्त अघि बढाउनुपर्ने कदम हो । किनभने यो सरकारमा बस्ने, पदमा बस्नेको मात्र जीवन रक्षाका लागि होइन, यो आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हो । त्यसैले जनता आफैँ अनुशासनमा बसौँ भनेर सरकारले आह्वान गरेको हो । यो कफ्र्यू होइन कि तोड्दै हिँड्नका लागि । यो त आफैँले आफैँलाई आज्ञापालक भएर राख्न खोजेको विषय हो । त्यसो हुनाले सबै नेपाली नागरिकले यो सोच्नु पर्‍यो कि यो हामीले हामीलाई नै लगाइदिएको सीमा हो । हाम्रै सुरक्षाका लागि हो । हामीबाट अर्कोमा नजाओस्, अर्कोबाट हामीमा नआओस् भनेर आफ्नै सुरक्षाका लागि भएको हुनाले सरकारले भनेर मानिदिएको रुपमा नलिन आग्रह गर्दछु । अतिआवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर नजाऔँ । सुरक्षाकर्मीले पनि औचित्यका आधारमा व्यवहार गरौँ ।
Tags : कोरोना भाइरस डा. युवराज खतिवडा